Imigangatho yamagumbi angenayo i-AC - I-Airbnb
Imigangatho yamagumbi angenayo i-AC
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguAmbalama
Amagumbi aqhelekileyo angenama-AC afana nezakhiwo ze-dutch ezixutyiweyo kunye nobutofotofo bale mihla obunika undwendwe ixesha elikhethekileyo nelanelisayo. Amagumbi aqhelekileyo angenawo umatshini wokufudumeza ifeni ibe unendawo ye-balcony ejonge igadi. Amagumbi aquka igumbi lokuhlambela, i-TV, indawo yokuhlala, inkonzo yegumbi, njl.
Indawo Yokuphumla Yokuzonwabisa, eHanwella, eSri lanka, inika iindwendwe indawo yokuhlala kwihotele enobuhlobo ne-Eco enamagugu aseSri Lanka kunye nokubukwa kweendwendwe okuqhelekileyo.
Yiyure nje enye ngemoto ukusuka eColombo, eAmalama yindawo efanelekileyo yabantu abathandana nomtshato, ukudibana, Ukuphuma kwabasebenzi, iiSeminars, Imitshato, Indawo Yokukhempisha Ebusuku ibe iquka ivenkile yokutyela, iBar, iindawo zeB.Q, iSpa & A/C, Amagumbi angenanto yakwenza neCottages ezinechibi lokuqubha, ibala lokudlala lebhola elibi kunye nezinye izinto ezininzi.
Into kunye noHanwella kukuba, ikude kakhulu ukusuka eColombo ukuze uphole kwaye uhlale kwindalo, kodwa kungekhona kude kakhulu ukuyenza ibe yindawo yokuqhuba ixesha elide nokudiniweyo. Iholide eHanwella iqinisekisiwe ukuba yindawo yokuphumla neyolonwabo, ibe eyona nto ingakumbi, zininzi izinto onokuzenza njengoko uphola kwindawo ephithizelayo yobomi besixeko. Igadi yamanzi yaseSeethawaka, Ipaki yamanzi yehlabathi lokuzonwabisa, iDambora ella, ezinye zeendawo ezininzi onokutyelela kuzo ngoxa ukwindawo esikuyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Ambalama